China CAS 9032-42-2 HEMC yekuvaka kupindwa muropa Mugadziri uye Mutengesi |Longou
3. Hemc inobata basa rekukora, kuchengetedza mvura, iyo yakanyatsokodzera mvura yakavakirwa pendi yekuvaka, inki uye kuchera mafuta.
4. Yakanaka yekuwedzera yehupfu zvinhu.Inoshandiswa se gelling agent, mvura inochengetedza mumiriri we cent uye gypsum.
HEMC kuvaka additives 1
Zita Hydroxyethyl methyl cellulose
Gelling tembiricha 60--90(℃)
Viscosity (2% mhinduro) 400--20 00000S(mPa.s, NDJ-1)
1. HEMC inoita basa rekukora, kuchengetedza mvura, iyo yakanyatsokodzera mvura yakavakirwa pendi, zvekuvaka, inki uye kuchera mafuta.
2. Yakanaka yekuwedzera yehupfu zvinhu.Inoshandiswa segelling agent, mvura inochengetedza simenti, gypsum.
3. Inoshandiswa sekuwedzera kune mazino, zvizoro uye detergent.
Zvakapfuura: High viscosity HEC inoshandiswa mukuchera peturu
Zvinotevera: CAS 9004-34-6 Cellulose fiber yekuvaka
Kemikari Mvura Inochengetedza Mumiririri HEMC yekugadzira ...